Wararkii Ugu Dambeeyay Xildhibaano iyo Wasiiro oo Xalay Seexday Jomo kenyatta – Radio Simba 95.0 MHZ – Simbanews – Idaacada Simba
Dowladda Kenya ayaa waziiro iyo xildhibaano ka tirsan dowladda Somalia ka hor istaagay inay gudaha u galaan magaalada Nairobi kadib markii ay diiday in passport kooda Somaliga ah ay ugu dhufato dal ku galka.
Qaar kamid ah mas’uuliyiinta ay kenya kahor istaagtay inay gudaha u galaan Kenya ayaa markii dambe kaga baxay garoonka diyaaradaha Jomo Kenyatta passport -da dalal kale oo ay wateen.
Mas’uuliyiin kale oo ay kamid yihiin waziir ku xigeenka wazaaradda tamarta iyo biyaha xukuumadda Somalia Cisman libaax iyo senatarada kala ah Zamzam Ibrahim Cali iyo Ilyaas cali xasan ayaa xalay seexday garoonka Jomo kenyatta waxaana saacadaha soo socdo la filayaa inay kusoo laabtaan magaalada Muqdisho.
Mas’uuliyiintaan isugu jira waziirada iyo xildhibaanada ayaa magaalada Nairobi u tagay si ay kaga qeyb qaataan shir ay lahaayeen Qm, IGAD, Dowladaha Kenya, Ethiopia iyo Somalia.
Dowladaha Somalia iyo Kenya ayaan wali wax war ah kasoo saarin dhacdadaan oo u muuqata mid sii kala fogeyneyso labada dhinac oo ay xurguf diblomaasiyadeed ka dhaxeysay wixii ka dambeeyey curashada sanadkan 2019.
Laba toddobaad kahor dowladda Kenya ayaa joojisay duulimaadyada tooska ah ee magaalooyinka Nairobi iyo Muqdisho waxaana ay dib usoo celisay in diyaaradaha ka baxa Muqdisho ay sii maraan Wajer si halkaas loogu baaro.
Bishii March ee sanadkii 2017 madaxweynaha Somalia Maxamed Cabdullahi Farmajo ayaa dowladda Kenya kala heshiiyey joojinta hakashada ay diyaaradaha Muqdisho ka baxa ku hakadaan Wajeer, balse dowladda Kenya ayaa dib usoo celisay in diyaaradaha ka baxa muqdisho ay maraan Wajeer oo ku tilmaamtay arrimo dhanka amniga la xiriira.
Tallaabada ay Kenya ugu diiday dal ku galkeeda siyaasiyiintan Soomaalida ah ayaa yimid iyadoo maalinti shalay ay cod aqlabiyad leh baarlaamaanka Somalia ku ansixiyeen xeerka Petrolka Somalia oo la bilaabay sanadkii 2008.
Hore waxaa dowladaha Somalia iyo Kenya u dhex maray muran ka dhashay sahmin shidaal oo laga sameeyey qeybo kamid ah biyaha Somalia oo ay dowladda kenya sheeganeyso inay iyada leedahay.